Social Media မှာ Post တွေကို ထိရောက်အောင် ဘလိုတင်မလဲ?
(2) သင့်ရဲ့ Reader
Posted by Min Thuta/ ဇွန် 6, 2021/ Blog/0Comment
Social Media မှာ Cover Image တွေအသုံးဝင်နိုင်မယ့် Tips အချို့
Social Media ပေါ်မှာကိုယ့် သတိမထားမိတဲ့ အချက်လေးတွေက အရမ်းကို အရေးပါနေတတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ Business လုပ်ငန်းတွေကို Social Media နဲ့တွဲပြီးလုပ်ကိုင်ထားတယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့ Business အတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ Cover Image က ဘယ်လောက်အရေးပါဝင်သလဲ? Cover Image ကဘာတွေအကျိုးအမြတ်ရမှာ? ဒီ Cover Image တွေဟာ Business လုပ်ငန်း
Posted by Min Thuta/ ဇွန် 5, 2021/ Blog/0Comment
Website တစ်ခုမှာ Traffic အတွက်ဆိုဘာတွေ သိထားသင့်လဲ?
Website တည်ဆောက်ပြီး လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ Website Traffic ကို အဓိက အားပြုပြီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်တွေအတွက် Traffic ကောင်းကောင်းရနိုင်ဖို့နဲ့ ရရှိထားတဲ့ Traffic တွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို Traffic ကောင်းရဖို့အတွက် Content တွေကလည်း အများကြီး သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Website Traffic ကိုကောင်းကောင်း အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မယ့် Content
Posted by Min Thuta/ ဇွန် 4, 2021/ Blog/0Comment
Ads Campaign တွေတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အတွက် Creative ဖြစ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Ads Campaign တွေတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင် မေးသင့်တဲ့မေးခွန်း ၅ ချက် ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့…..
သင့်ရဲ့ Ads Campaign အတွက် Target Audience တွေက ဘယ်သူတွေလဲ ?
သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် အထိရရှိပြီးမြောက်ဖို့ ဘယ်လို ကြော်ငြာ တွေကိုဖန်တီးချင်တာလဲ ?
အောင်မြင်တဲ့ Creative Ad
Posted by Min Thuta/ ဇွန် 3, 2021/ Blog/0Comment
Calorie Counting App ကောင်းကောင်း ရှာဖွေနေပါသလား?
ဒီ App ကတော့ Calorie တွက်ချက်ရမှာ
Posted by Min Thuta/ ဇွန် 2, 2021/ Blog/0Comment
ရေရှည်အောင်မြင်တဲ့ Website တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်…
Posted by Min Thuta/ ဇွန် 1, 2021/ Blog/0Comment
လုပ်ငန်းကို Social Media ပေါ်မှာ ပြန်လည်တိုင်းတာနိုင်မယ့် အချက်(၅) ချက်
မိတ်ဆွေ သင်ဟာ Social Media နယ်ပယ်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Social Media နယ်ပယ်ပေါ်ကနည်းလမ်းတွေကို ဘယ်လိုခြေရာခံမလဲ? ဘယ်လိုတိုင်းတာနိုင်မလဲ?ဆိုတာကို သိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကသာ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအပေါ်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ အတိုင်းအတာ ပမာဏတစ်ခုကို ပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်း Social Media ပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ထိ ထိထိရောက်ရောက် အောင်မြင်ေ
နပြီလဲဆိုတာ ကို တိုင်းတာဖို့အတွက် နည်းလမ်း
Posted by Min Thuta/ မေ 31, 2021/ Blog/0Comment
Email Marketing နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
လက်အချိန် Online မှာလူတိုင်းနီးပါး ပြောဆိုနေကျတဲ့ အရာတွေက Facebook စာမျက်နှာက အကြောင်းရာတွေ၊ Quick-tips Video တွေ၊ Instagram Feeds ကအကြောင်းအရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသုံးများတဲ့ Social Platform တွေသာ အသုံးများကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Email ကိုတော့ လူတိုင်းနီးပါး ထဲထဲဝင်ဝင် သိပ်အသုံးမပြုကြပဲ Business နယ်ပယ်ကသူတွေလောက်သာ အသုံးပြုကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို
Posted by Min Thuta/ မေ 30, 2021/ Blog/0Comment
Public Post တွေမှာ Comment ပေးချင်တိုင်းပေးလို့ မရအောင်ဘလို လုပ်မလဲ?
Facebook ပေါ်မှာ Post တင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ကိုယ်နဲ့ Friend မဟုတ်တဲ့ သူတွေ Comment လာပေးလို့ မရဘူးအောင်ဆိုရင် Privacy မှာ Friends တို့ Friends Except တို့နဲ့ တင်ကျတာများပါတယ်။ ဒီလို Post တင်တဲ့ အခါမှာတော့ ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ Post က ကိုယ်နဲ့ Friend ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေပဲ
Posted by Min Thuta/ မေ 29, 2021/ Blog/0Comment
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ Customer Rating ပိုတိုးလာအောင် ဘာလုပ်သင့်လဲ?
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင် Product/Service တွေရဲ့ ရောင်းအားအတွက် Customer Rating ကအရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Review တွေနဲ့ Rating တွေဟာ Product/Service တစ်ခုခုကို သိချင်ပြီးဆိုရင် Customer အများစုအဓိက ထားပြီး ရှာဖွေကြည့်ရှုတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ Customer တွေဟာ သူတို့လိုတဲ့အရာကိုတော့ကောင်းတာလေးပဲလိုချင်လို့ပါ၊ အဲ့ဒီ Product/Service မှာ Negative Review တွေ Bad
Posted by Min Thuta/ မေ 28, 2021/ Blog/0Comment